U-Swoop wethula izindiza ezintsha eziya e-Palm Springs zisuka e-Edmonton
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » U-Swoop wethula izindiza ezintsha eziya e-Palm Springs zisuka e-Edmonton
U-Swoop wethula izindiza ezintsha eziya e-Palm Springs zisuka e-Edmonton.
Ukuzibophezela kukaSwoop ku-Edmonton kuwuphawu olucacile lokuthi kukhona ukuzethemba Ohlelweni Lokubuyisela I-Alberta. Imizila emisha enqamula eCanada nasePalm Springs ivula amathuba ajabulisayo ezokuvakasha nezamabhizinisi.
Ukwandisa ukuxhumana kulo lonke elase-Canada nangale kwesikhumulo sezindiza i-Edmonton International kubalulekile esifundeni.
Ukukhula kwenkampani yezindiza kuzobona amandla endiza kaSwoop enhlokodolobha yase-Alberta ekhuphuka ngo-76% uma kuqhathaniswa namazinga angaphambi kobhubhane.
Ukunwetshwa kwe-Swoop okusekela ukwakhiwa kwemisebenzi eyengeziwe eyi-140 eqondile kanye ne-spin off kanye nenani elilinganiselwa ezigidini ezingama-dollar ayi-120 lomsebenzi wokukhipha umnotho ngo-2022.
Namuhla, Shintshela, inkampani yezindiza yaseCanada ebiza imali ephansi kakhulu, iphinde yaqinisekisa ukuzibophezela kwayo Esifundeni Sedolobha Lase-Edmonton ngesimemezelo sesevisi entsha e-US eyodwa nasezindaweni eziyisishiyagalombili zasekhaya kusukela endaweni yayo eseNtshonalanga yeCanada. Ukutshalwa kwezimali okusha okubalulekile kwenkampani yezindiza kugujwe namuhla ekuseni eduze kokwethulwa kwendiza entsha yakwa-Swoop, ezondiza negama elithi #Edmonton.
Ukukhula kwenkampani yezindiza kuzobona ShintshelaAmandla endiza enhlokodolobha yase-Alberta akhuphuka ngo-76% uma kuqhathaniswa namazinga angaphambi kobhubhane, asekela ukwakhiwa kweminye imisebenzi eqondile ne-spin-off eyengeziwe eyi-140 kanye nokulindelwe ku-$120M womsebenzi wokukhiqiza umnotho ngo-2022.
“Lesi yingqopha-mlando Shintshela njengoba sigcizelela ukuzibophezela kwethu ekuholeni indlela yokuhamba ngendiza ebiza kancane eCanada futhi siqinisekisa isikhundla sethu njengenkampani yezindiza enezindawo eziningi ezivela e-Edmonton,” kusho uCharles Duncan, uMongameli weSwoop. “Ngokugxila kakhulu ekukhuleni nase-Edmonton njengozakwethu, sizoqhubeka nokuhlinzeka abahambi bethu ngezindiza ezingami kanye nemali yokugibela ephansi kakhulu kuyilapho sisekela ukusimama komnotho wezokuvakasha nokuvakasha waseCanada.”
Ukwengezwa kwezindawo ezintsha eziyisishiyagalombili zase-Canada kushejuli yasehlobo ye-Swoop kuzobona isevisi engami ukusuka e-Edmonton ukuya e-Charlottetown, e-Comox, e-Halifax, e-Kelowna, e-Moncton, e-Ottawa, e-Regina nase-Saskatoon.
I-Swoop izoba inkampani yenethiwekhi yokuqala ukuletha ukuxhumana okungami kusukela ku-Edmonton International Airport kuya e-Charlottetown nase-Moncton futhi uhlelo lwasehlobo lwenkampani yezindiza luzobona nokubuyiselwa kwesevisi e-London, e-Ont.
Kusukela ngomhlaka-16 Disemba, ubukhona be-Swoop obunqamula umngcele buyakhula busuka e-Edmonton ngokwengezwa kwesevisi entsha ukuze Palm Springs. Isevisi ehleliwe engapheli eya Palm Springs izosebenza kabili ngesonto.
Novemba 15, 2021 ku-23: 12
Sicela uzikhiphe ohlwini